အထွေအထွေဗဟုသုတ Archives - Achawlaymyar
မြန်မာနှစ်ဆန်း(၁)ရက်နေ့ ( ၁၇ . ၄ . ၂၀၂၂ ) ခါင်းဆေးမင်္ဂလာ ဆောင်ရွက်ချင်တဲ့ တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်
April 16, 2022 by Achawlaymyar
မန်မာနှစ်ဆန်း(၁)ရက်နေ့ ( ၁၇ . ၄ . ၂၀၂၂ ) ခါင်းဆေးမင်္ဂလာ ဆောင်ရွက်ချင်တဲ့ တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက် မြန်မာနှစ်ဆန်း(၁)ရက်နေ့ ( ၁၇ . ၄ . ၂၀၂၂ ) ခါင်းဆေးမင်္ဂလာ ဆောင်ရွက်ချင်တဲ့ မိတ်ဆွေများအတွက်ဖြစ်ပါတယ် …။ နှစ်ဟောင်းမှာရှိတဲ့ မကောင်းတဲ့အခိုက်အညံ့တွေ ကင်းစင်ကြေပျောက်ပြီးတော့ …. နှစ်သစ်မှာ စိတ်သစ် လူသစ် ၊အားသစ်အင်သစ် ၊ အကြံသစ် ဥာဏ်သစ်တွေနဲ့ တစ်နှစ်တာလုံး အတိတ်ကောင်း နိမိတ်ကောင်းတွေနဲ့ အန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်းပြီး ကံဇာတာပွင့်လန်းတိုးတက် ၊ စီးပွားတက်ရလေအောင် ၊ အကြံအစည်ရည်ရွယ်ချက်များ ပြည့်မြောက်အောင်မြင်အောင် ခေါင်းဆေးမင်္ဂလာကို ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ် ….။ မြန်မာနှစ်ဆန်း(၁)ရက်နေ့မဟုတ်သော်လည်း အကြောင်းကြီးငယ်ရှိတိုင်း ခေါင်းဆေးမင်္ဂလာကို ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ် … ။ ရှေးဆရာအစဉ်အဆက် အားကိုးအားထားပြု … Read more
ရောကျလာတော့မယျ့ ၁၃၈၄ နှဈဆနျးတဈရကျနတှေ့ငျ ပွုလုပျရမညျ့ နှဈဦးမင်ျဂလာယတွာ
ရောကျလာတော့မယျ့ ၁၃၈၄ နှဈဆနျးတဈရကျနတှေ့ငျ ပွုလုပျရမညျ့ နှဈဦးမင်ျဂလာယတွာ အား ကွိုတငျစီစဉျထားနိုငျစရေနျ မွနျမာလူမြိုးတို့ လှနျစှာခဈြမွတျနိုးကွသော ပိတောကျပနျးလေးမြား ဝစေညျဖူးဖှငျ့သညျ့ မွနျမာ့နှဈဦးသို့ ကူးပွောငျးတော့မညျ့အခါ ကာလရောကျလာပါပွီ။ မင်ျဂလာအပေါငျးနှငျ့ပွညျ့စုံသော နှဈဦးနှဈဆနျးမှသညျ နှဈသဈကိုကွိုဆိုကွရတော့မညျဖွဈ၏။ ဗုဒ်ဓဘုရားရှငျ၏ဒသေနာတျောနှငျ့အညီ ကာယကံကောငျးမှု၊ ဝစီကံကောငျးမှု၊ မနောကံကောငျးမှုတို့ဖွငျ့ မတ်ေတာ ကရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥပက်ေခာတညျးဟူသောဗွဟ်မစိုရျတရား (၄) ပါးကို ပှားမြား၍ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာအစရှိသော တရားမြားကို ပှားထုံကွရငျး ရှောငျသငျ့ တာကိုရှောငျ၍ ဆောငျသငျ့တာကို ဆောငျကွရပတေော့မညျ။ ကြှနျုပျတို့သညျ- သိလကျြနှငျ့ကောငျးမှုမကောငျးမှု ပွုခဲ့သညျဖွဈစေ- မသိခဲ့၍ ကောငျးမှု မကောငျးမှုပွုခဲ့သညျဖွဈစေ- သိခွငျးနှငျ့ မသိခွငျးကွားတှငျ အကွောငျးမညီညှတျ၍ ကောငျးမှု မကောငျးမှုပွုခဲ့သညျဖွဈစေ၊ အမွငျဟောငျး၊ အထငျဟောငျး၊ အတှေးအချေါဟောငျး၊ အယူအဆဟောငျး၊ အကွံအစညျဟောငျး၊ ကံကွှငျးကံဟောငျးမြား၊ ကုသိုလျကံ၊ … Read more
ငှဝေငျခါနီး ပွလရှေိ့တဲ့ ရှပွေ့ေးနိမိတျမြားအကွောငျး
ပိုကျဆံဝငျခါနီးရငျ ပွလရှေိ့တဲ့ ရှပွေ့ေးနိမိတျမြားအကွောငျးကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။ လငျးယုနျ လငျးယုနျကို အိပျမကျတာကလညျး ငှဝေငျမယျ့ ရှပွေ့ေးနမိတျအိမျမကျပါ။ လငျးယုနျကတော့ ရဲရငျ့မှု၊ သတ်တိရှိမှုကို ကိုယျစားပွုတဲ့ တိရစ်ဆာနျပါ။ ဂရိဒဏ်ဍာရီမှာဆိုရငျလငျးယုနျကZeus နတျဖုရားရဲ့ကူညီပံ့ပိုးသူအဖွဈလကျခံယုံကွညျကွပါတယျ။လငျးယုနျကိုအိမျမကျမကျရငျ ငှဝေငျမယျ၊ ကွံစညျသမြှအောငျမွငျမယျဆိုတဲ့အယူရတယျ။ နို့ (ဒါမှမဟုတျ) ပြားရညျ အိမျမကျထဲမှာ နို့တှကေိုမကျတာ ဒါမှမဟုတျ ပြားရညျကို မကျတာမြိုးက မကွာခငျမှာငှဝေငျတော့မယျဆိုတဲ့နိမိတျပါပဲ။ဥပမာ- ပြားအုံကွီးကို ပြားရညျညှဈတာမြိုး၊ နှားနို့ ညှဈတာမြိုး၊ နို့တှကေလမျးတှပေျေါ မှာ ဖုံးလှမျးနတောမြိုးအစရှိတဲ့အိမျမကျမြိုးပါ။ နံပါတျ(၈) ဂဏနျးနံပါတျ (၈) က တရုတျနဲ့ အာရှနိုငျငံတှမှောဆိုရငျကံကောငျးစတေဲ့ နံပါတျတှလေို့ သတျမှတျခံထားရတာပါ။ဒါပမေယျ့ မွနျမာမှာတော့(၈) ဂဏနျးက မကောငျးဘူးဆိုတဲ့အယူအဆတဈခြို့တော့ ရှိပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး (၈)က ဝငျငှခေါနီးရငျတှရေ့တတျတဲ့ရှပွေ့ေးအရာတှထေဲကတဈခုပါ။ (၈) ဂဏနျးကိုမကျပွီဆိုရငျတော့ သငျမကွာခငျငှကေံကောငျးတော့မှာဖွဈပါတယျ။ ရှေ နဲ့လကျဝတျရတနာ ရှဆေိုတာက … Read more
မွနျမာ့ရိုးရာနှဈသဈအခါသမယမှာ ခဈြသူနဲ့ဖူးစာဆုံကိနျး ရှိ၊ မရှိ။
April 14, 2022 by Achawlaymyar
ချစ်သူနဲ့ ဒီနှစ်ဖူးစာဆုံနိင်မှာလားလို့ ဗေဒင်ဆရာတွေ မကြာခဏ အမေးခံရတတ်ပါတယ်။ဗေဒင်ပညာကို လေ့လာချင်ရင်ဒီတွက်နည်းကို သိထားသင့်ပါတယ်။ တွက်နည်းက လွယ်ပါတယ် မြန်မာ့ရိုးရာ တွက်နည်းပါပဲ။ဒီတွက်နည်းကို လက်တွေ့ ဟောပြောတဲ့အခါ အခက်အခဲလေးတွေ ရှိပါတယ် နားလည်အောင် ရှင်းပြပေးပါ့မယ် နားမလည်တာရှိခဲ့ရင် ပြန်လည်မေးမြန်းပါ။ရှင်းပြပေးပါ့မယ်။ တွက်နည်း အသက်၃၄နှစ်ရှိတဲ့ ကြာသာပတေးသမီးက ဒီနှစ်ထဲမှာ ချစ်သူနဲ့ အိမ်ထောင်ကျကိန်း ရှိမရှိမေးလာတယ်။မေးသူရဲ့အသက်ကိုတည် နေ့နံနဲ့ပေါင်း အမျိုးသားရဲ့ နေ့နံနဲ့ထပ်ပေါင်းပြီး ရလဒ်ကို၈နဲ့စား ဥပမာ=မေးသူအသက် ၃၄ နေ့နံ=ကြာသာပတေး ၅ ချစ်သူနေ့နံ=တနလာ င်္၂ ပေါင်းခြင်းရလဒ် ၃၄+၅+၂=၄၁ ၄၁ကို၈နဲ့ပြန်စား၄၁÷၈=၁ကြွင်း ကြွင်း၁၊၃၊၅၊ဝကြွင်းရင် မရသေးပါဘူး။အစီအစဉ်လေးတွေ နောက်ရွှေ့ရမယ်။ချစ်သူဘဝမှာဘဲ တင်းတိမ်ကြပါဦး။နှစ်ယောက်ကြားမှာ ရှိတဲ့ အဖုအထစ်လေးတွေ ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းကြပါဦး တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ကြားမှာ ဘေးစကား အနှောက်အယှက်တွေ ရှိနေပါတယ်။အိမ်ထောင်ပြုဖို့ စီစဉ်ပါက ပျက်ရွင်းတတ်ပါတယ်။ ၂၊၄၊၆ကြွင်းရင် … Read more
ကိုယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ရင် အဆင်ပြေနိုင် မပြေနိုင် တွက်ကြည့်နိုင်တဲ့နည်း
April 13, 2022 by Achawlaymyar
ကိုယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ရင် အဆင်ပြေနိုင် မပြေနိုင် တွက်ကြည့်နိုင်တဲ့နည်း ကိုယ်နဲ့ သူနဲ့ ဖူးစာကံပါမပါ၊ ပြီးတော့ ဘယ်လိုချစ်ခြင်းမျိုးနဲ့ လက်တွဲသွားကြမယ်ဆိုတာကို လွယ်လွယ်ေ လးတွက်ပြီး သိမြင်နိင်တဲ့ ဗေဒင်တွက် နည်းလေးပါ ချစ်သူမွေးနေ့သက္ကရာဇ်အားလုံးပေါင်းကြည့် ၊ နောက်ဆုံး ရလာတဲ့ကိန်းတစ်လုံးက အဖြေပေါ့။ ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ ကြည့်ကြရအောင်နော် သင်က 23.4.1991 သင့်ချစ်သူက 14.7.1992 ဆိုပါစို့ သင့်မွေးနေ့ + သင့်ချစ်သူမွေးနေ့ = အဖြေ 23 +4+ 1991 + 14 +7+ 1992 =4031 မွေးနေ့၂ခုပေါင်းထားတဲ့ အဖြေ4+0+3+ 1 = … Read more
တန်ခူး လမွေးဖွားသူအများစုတို့သည် ပင်ကိုယ်စိတ်ဓါတ်အားဖြင့် အလွန်သဘောထားကြီးတတ်ကြပါသည်။ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာ နေတတ်သည်။ အမြဲတမ်း ကြည်လင်အေးချမ်းစွာ နေပြီး ပြုံးပျော်ရွင်မြူးစွာ ပြောဆိုနေတတ်သည်။ ဖြတ်ထိုးဉာဏ် ကောင်းမည်။ ဟာသဉာဏ် ရွှင်သည်။ အပေါ်ယံအားဖြင့် ဘာမှ အလေးမထားသလို ပေါ့ပေါ့တန်တန်၊ ဘာသိဘာသာအသွင်သဏ္ဍာန် နေတတ်ပေမယ့် အရေးကြုံသော အခါတွင် ရဲရင့်ထက်မြက်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်း ရှိကြသည်။ အရေးကြုံသောအခါတွင် ခေါင်းဆောင်နေရာမျိုးတွင် ဝင်ရောက်ကာ တာဝန်ယူ လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်း ရှိကြသည် ကျန်အချိန်များတွင် ကြွားဝါခြင်း ကင်းလျှက် မထင်မရှားသာ နေတတ်သည်။ ငါသိ၊ ငါတတ်၊ ငါသာမြတ်ဟူသော စရိုက်မရှိ။ ကိုယ့်အရည်အချင်းကို ထုတ်ဖော်ခြင်းမရှိ ပညာလက်သည်းဝှက် နေတတ်ကြသည် သို့သော် တန်ကူးလဖွားများသည် အငြိုးအတေးကြီးသည် ရင်တွင်းမာန ကြီးမားသည်။ ဒေါသထွက်လာလျှင် ကြောက်စရာကောင်းလှအောင် ခက်ထန်လာတတ်သည် အလွန်ခေါင်းမာစွာ အရွဲ့တိုက်လိုသည် … Read more
ကိုယ့်ကို တစ်ယောက်ယောက်က မကောင်းကြံနေတာမျိုး၊ မလိုမုန်းထားရှိတာမျိုး၊ အတိုက်အခိုက်တွေ ရှိနေတာမျိုး ကြုံတဲ့အခါ
April 7, 2022 by Achawlaymyar
ကိုယ့်ကို တစ်ယောက်ယောက်က မကောင်းကြံနေတာမျိုး၊ မလိုမုန်းထားရှိတာမျိုး၊ အတိုက်အခိုက်တွေ ရှိနေတာမျိုး ကြုံတဲ့အခါ ကိုယ့်ကို တယောက်ယောက်က မကောင်းကြံနေတာမျိုး၊ မလိုမုန်းထားရှိတာမျိုး အတိုက်အခိုက်တွေ ရှိနေတယ်လို့ ကိုယ့်ရဲ့ ဆဌမအာရုံက သိနေတာမျိုးကို မယုံပေမယ့် မကောင်းတာ ဆက်တိုက်ဆိုသလို တွေ ဖြစ်လာတာမျိုး ရှိတဲ့အခါ… မကောင်းတာတွေကို ဖယ်ရှားဖို့ တလျော်နဲ့ ခေါင်းလျှော်ရင်း ( ဗုဒ္ဓံ ဓမ္မံ သဃံ) ရွတ်ဆို ( သံဗုဒ္ဓေ ဂါထာကို သက်စေ့ ) ရွတ်ဆိုရင် မကောင်းတာအားလုံးကို ဖယ်ရှားပစ်နိုင်တယ် ဆိုတာယုံပါ… အမျိုးသားများအနေနဲ့လဲ တလျောကင်ပွန်းနဲ့ ခေါင်းလျှော်ရင် ဘုန်းကံကြီးမားပီး အိမ်ဦးနတ်အဆင်ပြေရင် တစ်မိသားစုလုံးကို အကျိုးသက်ရောက်စေလို့ မဟေသီမမ များကလဲ အိမ်ဦးနတ်ကို တလျော်ကင်ပွန်းနဲ့ ခေါင်းလျှော်ဖို့ တိုက်တွန်းပေးကြပါလို့ အကြံပေးလိုပါတယ်။ “ဘုန်းပွင့် … Read more
April 6, 2022 by Achawlaymyar
မည်သည့် သီးပင်စားပင်ကိုမဆို ရာသီချိန် မဟုတ်ချိန်မှာ အသီး သီးအောင်လုပ်နည်း ကြက် ဥ ဟို မုန်း ဆေး ရည် လုပ် နည်း… ကြက် ဥ အ ခွံ ရော အ သား ပါ ၁ ပိ သာ။ သ ကြား ၁ ပိ သာ။ နွား နို့ ၁ ပု လင်း ခွဲ။ ပု ဇွန် ခြောက် ၃၀ သား။ အုန်စိမ်း အ ရည် ၂ ပု လင်း။ ဆန် ဆေး ရည် ၂ ပု လင်း။ အုန်း နို့ … Read more
အောင်မြင်ပြီး ရာင်းကောင်းတဲ့ ဈေးဆိုင်ဖြစ်ဖို့ အတွက်ဆိုရင် ဒီအချက်လေးတွေတော့ သိဖို့လိုမယ်…
အောင်မြင်ပြီး ရာင်းကောင်းတဲ့ ဈေးဆိုင်ဖြစ်ဖို့ အတွက်ဆိုရင် ဒီအချက်လေးတွေတော့ သိဖို့လိုမယ်… ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေ သတိထားပြီး ပြင်ဆင်ရမယ့် ဈေးရောင်းနည်း ၇ ချက် တော်တော်များများလည်း သတိထားမိမယ်ထင်ပါတယ်… အခြားလူ တွေဆိုင်ဖွင့်တဲ့အခါ ဆိုင်ခွဲတွေ တစ်ဆိုင်ပြီးတစ်ဆိုင် ထပ်ထပ်ဖွင့်ကြတယ်…. မြန်မာတွေဆိုင်ဖွင့်တဲ့အခါ အရင်းပြုတ်ပြုတ်သွားကြတယ်…ဘာတွေ ကွာခြားနေလို့လည်းဆို လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ… ၁။ အလုပ်ချိန်တိကျတယ်။ ဆိုင်ပိတ်ချိန် တစ်ခါတစ်ရံမှသာ နောက်ကျတတ်ပြီး နယ်အော်ဒါများတဲ့အခါ ဒီနေ့ဝင်တဲ့အော်ဒါ ဒီနေ့အပြီး ထုတ်တယ်။ နောက်နေ့ကူးရင် နောက်နေ့အော်ဒါတွေအတွက် အဆင်ပြေပြေလုပ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ၂။ သူဌေးအလုပ်က ဆိုင်ရဲ့ ပစ္စည်းအဝင် အထွက် ပစ္စည်းအားလုံး ခေါင်းထဲမှာ ရှိတယ်။ ဆိုင်သမားရဲ့အသက်က ပစ္စည်းရှိရမယ်။ စစ်သားရဲ့အသက်က ကျည်ဆံရှိရမယ်လို့ ဆိုရိုးရှိတဲ့အတိုင်း ကိုယ်ဆိုင်မှာ ပစ္စည်းမပြတ်စေဖို့ နဲ့ ပစ္စည်းစုံစုံလင်လင်ရှိဖို့ အာရုံစိုက်တယ်။ ၃။ သူဌေးက … Read more